शा रीरिक स म्पर्कका बेला महिलाबारे पुरूषले जान्नुपर्ने ५ कुरा ! - नेपाली खोज
यौ न भन्नसाथ नेपाली समाजमा मानिस ‘लजाउने’ गर्दछन् र यस बिषयलाइ नकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । हाम्रो समाजमा यसलाइ खुला रूपमा लिने गरेको पाइदैन । तर यसलाई सहज रुपमा लिन आवश्यक छ । शा रीरिक स म्पर्क महिला पुरुषबिच गो-प्य तर प्राकृतीक प्रकृया हो। तर धेरै मानिस यसबारे जानकारी लिन वा चर्चा गर्न ‘लजाउने’ गर्दछन् ।
जसका कारण चासो भएर पनि मानिस यसबारे सोध्ने हिम्मत गर्दैनन् । तसर्थ महिलाका बारेमा पुरुषले जान्नै पर्ने केहि जानकारी दिदैँछौ ।
– स म्भोगका बेला महिलामा एस्ट्रोजनको स्तर बढ्ने भएकाले यसले अनुहारको छाला नरम हुने र कपाल चम्किलो हुन्छ साथै रक्तप्रवाह पनि बढ्ने गर्दछ । तसर्थ यो समय उनीहरु अधिक सुन्दर र आकर्षक देखिन्छन् ।
– महिलाहरु शारी रिक स म्पर्कका बेला पार्ट नरप्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाउछन् । यस बेला उनीहरुमा का मुकता बढ्ने भएकाले पुरुषको शरीर सु’म्सुम्याउन र प्रेम दर्शाउन रुचाउँछन् ।
-कुनै पनि चि’न्ता वा त ना-वग्रस्त भएका बेला महिलाहरु शरी रिक स म्पर्कका लागी तयार हुन सक्दैनन् । त नावले महिलाको यौ न रुचीमा कमी ल्याउँछ ।
– शा री रिक स’म्पर्कअघि दुबै पार्ट-नरबीच मान सिक तथा शा री रिक तयारी हुनु पर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु महिला पा र्टनरको ‘मुड’ नबुझि ज बरजस्ती स म्बन्ध राख्न खोज्छन् । तर यसले बिस्तारै महिलालाई यौ नबाट घृ णा उत्पन्न हुन्छ ।
– कतिपय ब्यक्तिमा शा-रीरि क सम्प र्कपछि यो नीलाई सफा गरे वा केहि बेर टुक्रुक्क बसे ग र्भ रहदैन भन्ने गलत मान्यता छ ।महिला ग र्भवती हुन वी र्य यो निभित्र प्रवे श गरेपछि यो तीव्र रुपमा सक्रिय हुन्छ । तसर्थ यो भ्र म हो ।
याै’न जीवन कसरी खुसी राख्ने ?
यौ ’न स’म्ब न्ध सन्तान जन्मा उनका लागि मात्र नभइ दाम्पत्य जीवन सफल बनाउन पनि यसको अपरिहार्य छ । साथै यो पछिल्लो समय मनोरञ्जनको एक माध्यमको रुपमा बढ्दै गएको छ । यौ ’नमा आ नन्द लिनकाका लागि केही उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । यौ-न स’म्पर्कलाई जति लामो र आनन्ददायी बनाउन सकिन्छ त्यतिनै पा-र्टनरबीचको सम्बन्धपनि बन्न जान्छ । त्यसैले यौ’न स’म्प-र्कका लागि केही कुरा जान्न अावश्यक छ ।
विभिन्न रुढिवादी विचारलाई दिमागबाट टाढा राखेर सबैभन्दा पहिले कसरी लामो समय यौ’ नको ‘मज्जा’ लिने भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। यौ’नस’म्पर्क गर्ने भन्दा पनि लामो समय एक–अर्कासँग ‘जिस्किएर’, खेलेर तथा कुराकानी गरेर ‘मज्जा’ लिने प्रयास गर्नुहोस्।
एक–अर्काको सं’वे-दनशील अं’ग चला’उनुहोस् र उत्ते’जनामा आउने प्रयास गर्नुहोस् ।
यौ-न साथी ओच्छ्यानमा आउनुभन्दा अघि नै आफू तयार भएर बस्नुहोस्। जस्तो कि नुहाउने, मन्द सेन्ट छर्कने अादी यौ’न-स’म्पर्कलाई एउटा अत्यावश्यक कर्मका रूपमा लिनुहोस्। खुलेर कुराकानी गर्नुहोस्। एक–अर्काको अनुभव साटासाट गर्नुहोस्, जसले गर्दा यौ’न क्रि’याकलाप म-स्तिष्कबाटै सक्रिय होस्।
कतिपय महिला–पुरुष मु ख मै’ थुन रुचाउँछन् भने त्यो हुनु नराम्रो होइन, तर सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ। यदि साथीलाई यस्तो व्यवहार मन पर्दैन भने प्रयोग नगरकै राम्रो हुन्छ। हतारमा गरिएको स’म्पर्कले दुवै जनालाई च’रम आनन्द नआउन सक्ने भएका कारण समय लिएर दुबै जनालाई आ’न-न्द आउने गरि स’म्पर्क गर्नुहोस् । जसले याै-नसु’ख त मिल्छ नै दाम्पत्य जीवन पनि सफल हुन्छ । एजेन्सी
यो पनि पढ्नुहोस्- यी ५ किसिमका पुरूषबाट महिलाहरु सधै टाढा भाग्छन्
केहि यस्ता पुरूष हुन्छन् जोबाट महिला टाढा भाग्छन् । पुरूषका केहि नराम्रा बानी हुन्छन उक्त बानी महिला पटक्कै मन पराउदैनन् ।
केयर नगर्ने पुरुष:
सबै महिलाहरूले केयर गर्ने पुरुष नै मन पराउने गर्दछ । पुरुषको केयरिङ गर्ने स्वभावले महिलालाई उनीहरूतर्फ आकर्षित गराउँछ । पुरुषले महिलाहरूको केयर गर्दैन् भने यस्ता पुरुषबाट महिलाहरू पनि टाढा रहने गर्दछ ।
यस्तो पुरुष जसले आफ्नै तारिफ मात्र गर्ने गर्दछ, त्यस्ता पुरुषलाई महिलाहरूले फिटिक्कै मन पराउँदैनन्,यस कारण यस्ता पुरुषबाट टाढिने गर्छन् महिला ।
फ्ल-र्ट गर्ने पुरुष:
पुरुषले आफ्नी प्रेमिकालाई कति बजे गएको, कहाँ गएको र किन गएको जस्ता कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाउछ भने पनि त्यस्तो पुरुष मन पर्दैन।
ई-ष्या गर्ने पुरुष:
यदि कुनै पुरुषले आफ्नो प्रेमिकालाई उसको पुरुष मित्रसँग बोल्न दिदैन् र ईष्र्या गर्ने गर्दछन् भने त्यस्ता पुरुषको नजिक पनि हुन् चाहदैन् महिला।
रुकुमपश्चिम घटनाका दोषीलाई हदैसम्म कारवाहीको माग
९ जना गायक गायिकाको स्वरमा रहेको ‘सौरव २०२०’ सार्वजनिक
धादिङ जिल्लामा चार महिनामा एक अर्ब रेमिट्यान्स